Sida loo horumariyo amniga iphone-kaaga iyo Apple ID-kaaga | Wararka IPhone
Juan Colilla | | Wararka IPhone, Amniga IPhone
Aaminsanaanta in IOS waa nidaam ka amaan badan kan Android, tanina waa run aad u nus ah, maadaama sida nidaam kasta oo kale, ay u badbaado badan tahay isku xiraheeda ugu daciifka ah, iyo sida nidaam kasta oo loogu talagalay dadweynaha, xiriiriyahaasi waa annaga.
Maanta waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iideysto si aan kuu siiyo liis talooyin ah oo si weyn wax looga beddelo amniga xogtaada, maadaama aan marwalba u maleyno in weerarada hackerku ay yihiin waxyaabo laga soo qaado filimada ama ay ku kooban yihiin dadka caanka ah, laakiin arintu sidaas maahan, midkeen kasta oo ka mid ah wuxuu noqon karaa dhibbane weerar xaasidnimo ah markasta.
In kasta oo ay run tahay in weerarada sababa saameynta ugu badan ay yihiin qaar sida weerarkii lagu qaaday Sony, Celebgate ama diidmada adeegga DDoS ee loo yaqaan 'Playstation Network' ama serverka Microsoft, qofkeen kasta oo ka mid ah ayaa dhibane u noqon kara weerar qiyaas yar markasta oo ay tahay maalintii, ha ahaato maqaaxi kuxiran WiFi-keeda, garoon diyaaradeed iyadoo la adeegsanayo shabakad bilaash ah ama xitaa la seexanayo guriga halka qof isku dayo inuu galo koontadayada iCloud.
Waana iyada oo aan loo eegin sida ay u xiran tahay macruufka iyo lakabyo badan oo nabadgelyo ah oo ay ku jiraan, haddii aynaan sameynin isticmaalka wanaagsan ee iyaga ka mid ahwax ma tarayaan. Taasi waa sababta aan u doonayo inaan ku dhiirrigeliyo dhaqamada ka kooban liistada soo socota, mid kastaaba wuxuu u adeegi doonaa inuu noloshaada dhijitaalka ah ka dhigo nolol badbaado leh oo gaar ah.
Talooyin badbaado ah
Ku dhaqso nidaamka sida ugu dhaqsaha badan xaqiijinta laba-tallaabo Laga soo bilaabo Apple, oo ay ku jiraan aalad cusub waxay qaadan kartaa daqiiqad ka dheer waqtiga xiga, laakiin waxay kaa badbaadin kartaa dhibaato badan, haddii aadan weydiinin Katniss Everdeen.
Adeegso xiriir VPN ah Mar kasta oo aad ku xidho shabakad WiFi ah oo aan lahayn lambarka sirta ah (Wicitaannada aan-sugnayn), sidan ayaad ku qarinaysaa dhammaan isku-xidhkaaga waxaadna awood u yeelan doontaa inaad daalacato adigoon ka walwalin in qof uu dhexgalo oo uu akhriyo.
Dalxiis ku samee barnaamijka 'iOS Settings app' Ilaa geeska ugu dambeeya, hubaal waxaad ka heli kartaa isbeddelo yar yar oo si fiican ula jaan qaadaya taleefankaaga casriga ah habka noloshaada oo aad uga takhalusi karto wax walwal ah (haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid wax aad hesho, marwalba waad noo imaan kartaa si aan wax badan uga sii baranno).
Ha riixin badhanka "Aaminaad" marka aad ku xirto iPhone-kaaga kumbuyuutar aanad adigu lahayn, iyo haddii aad kaliya ku sameyso kuwa aad isticmaaleyso iTunes dhab ahaantii si fiican wali. Ku riixida batoonkan waxay ka dhigan tahay inaad siiso kombiyuutar dhammaan xogta aaladdaadu ku jirto, haddii aadan riixin waxay sababi doontaa in kombiyuutarka uu kaliya ku soo dallaco batteriga qalabkeenna isagoo aan marin nidaamka faylkiisa.
Haddii aad leedahay JAILBREAK, ha rarin midkoodnaAfc2aad", sidoo kale"Dayactirka Guriga"midna"OpenSSH«, Haddii aad ubaahantahay wax ka beddeliddan wax uun hubso inaad ka saarto markii aad dhammeyso hadafkaaga si aad u xirto albaabka weerarada suurtagalka ah.
Calan fure sir ah oo isticmaal TouchID, iPhone aan lahayn lambarka sirta ah waa casuumaad xogtaada ugu dhow, adoo galaya iPhone-kaaga waxay ku arki karaan noloshaada sawirro, halka ay ku yaalliin gurigaaga, shaqadaada, meelaha aad ugu badan tahay, marinka shabakadahaaga bulshada, qoraaladaada, buugga xiriirka, emaylkaaga, farriimahaaga iyo wakhti dheer iwm.
Haddii aadan rabin in noloshaada gaarka ahi ay noqoto mid caam ah, ku qor lambarka sirta ah ee aaminka ah iPhone-kaaga, oo leh 'TouchID' uma baahnid inaad mar kale dhigto illaa aad dib uga billaabato iPhone-ka, iyo inaad dhigto hal mar 2dii maalmoodba waxba kuguma dhici doonaan.
Ku kaydso nuqulladaada iTunesWaxay u fududdahay sidii loo dejin lahaa eray sir ah oo la weydiin doono goorta aad rabto inaad soo celiso. Ka tagista nuquladaada keydka ah oo aan la qorin waxay muujineysaa in qof kasta oo marin u heli kara kombuyuutarkaaga uu heli doono dhammaan xogta aaladahaaga, waana in keydka aad ka soo saari karto wax kasta oo lagu sheegay qodobkii hore iyo wixii ka sii badan, oo ay ku jiraan faylasha ku jira iPhone-kaaga waxaa ilaaliya barnaamij u baahan sirta. Hadana kombiyuutarka la yaqaan, ka fikir haddii aad jeclaan lahayd inuu qofna awood u yeesho inuu helo dhammaan xogtaas, oo ay ku jiraan wada hadalka WhatsApp, iMessage ama arjiga aad isticmaasho.
Fiiri si fiican cinwaanada shabakadda Markii aad ka helayso adeeg muhiim ah adoo adeegsanaya xiriiriye emayl ama wax la mid ah, had iyo jeer maskaxda ku hay in muuqaalka degelku si fudud loo beddeli karo, URL ha sameyn. Taasi waa sababta ay tahay inaad markasta u fiirsato barta cinwaanka (ma aha magaca websaydhka, laakiin cinwaankiisa), cinwaanka wuxuu yeelan doonaa qaab "https://www.actualidadiphone.com", haddii aad gasho degel tufaax ah iyo The url wuxuu kubilaabmaa magacyo iyo nambarro qalaad, waa daliil cad oo ah in webka laqariyay, tanina waxay noqon kartaa kiis phishing ah, taas oo aad ugu mahad celineyso inaad siinayso Aqoonsigaaga Apple iyo lambarkaaga sirta ah markii aad gasho webka badda.
Haddii shabakaddu ku bilaabato "HTTPS" halkii ay ka sii fiicnaan lahayd "HTTP", tani waxay xaqiijinaysaa in xogtaada si ammaan ah loogu gudbiyo oo lagu kaydiyay server-ka.
Had iyo jeer daar Raadi My iPhone qalabkaaga, tani waxay ka hortageysaa qof kasta oo sheeganaya haddii sabab kasta oo aad lumiso, marka lagu daro, waxaad awoodi doontaa inaad heshid haddii ay dhacdo inaad lumiso oo aad xitaa soo bandhigto farriimaha shaashadda si aad uga soo kabato. Mar haddii adeeggan lagu hawlgeliyo Qufulka Waxqabadka ee iCloud, tani macnaheedu waa in cidina dib u soo nooleyn karin iPhone-ka, xitaa kadib dib u soo celinta, haddii aysan haysan ID-kaaga Apple iyo lambarka sirta ah.
Buugga xiriiriyahaaga, ee aad leedahay, iskuday inaadan qorin midkaaga Boostada Aqoonsiga Apple kii hore, ama si toos ah uga bood, tani waa sababta oo ah qof ayaa Siri ka codsan kara shaashadda qufulka «Yaan ahay»Kaaliyahana wuxuu si bilaa dembi ah kuu tusi doonaa dhammaan macluumaadka aad ku kaydisay naftaada ajendahaaga.
Had iyo jeer u dagaal sirtaada iyo amniga xogtaada, xitaa haddii tani macnaheedu tahay ka tagista WhatsApp sababtoo ah nidaamkeeda sirta ah ee nacasnimada ama tallaabooyinka amniga oo liita.
Haddii aadan u dagaallamin sirtaada, waxaad wax uga fududayn doontaa dadka doonaya inay gacanta ku dhigaan xogtaada, oo i rumee, maalinta ku dhaafta waad ka qoomameyn doontaa inaadan si fiican naftaada u ilaalin. Dhinaca kale, xogteenu waa annaga, oo shirkadaha sida Facebook ama Google ay ku bixiyaan adeegyadooda bilaash waa inay kaa dhigaan mid laga shakiyo, tani way dhacdaa maxaa yeelay xogteennu waa lacagteenna lacag bixinta, ka dib Facebook ayaa ku dacweeya iyaga kuwa xayeysiiya iyaga oo noo soo bandhiga xayeysiis shaqsiyeed ku saleysan da'da, jinsiga, dhadhanka, taariikhda daalacashada, waxyaabaha la jecel yahay, goobta, iwm ...
Hada hada kuwani waa talooyinka ugu muhiimsan, waxa ugu muhiimsan waa in had iyo jeer laga feejignaado taas khatartu waa dhab oo talaabo laga qaado arinta, dabcan tani way adkaan kartaa marka hore, laakiin ma ahan wax isku murugsan gabi ahaanba, waa mid fudud sida in si wanaagsan loo wargaliyo waxaanan iska ilaalin doonaa xaalado badan oo ceeb ah ama madax xanuun.
Haddii aad qabtid su'aalo badan oo ku saabsan tallaabooyinka amniga ee iOS oo aad rabto Qoto-dheere mawduuca waxaad aadi kartaa xiriiriyahan: Qoraallada Amniga ee IOS
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Amniga IPhone » Talooyin si weyn kor loogu qaado amniga aad iPhone
In ka badan, ku darista qoraallada sawirada iyadoo la adeegsanayo usbuuca
Barxadda 'NFC chip akhristaha' ayaa hadda laga heli karaa Apple Stores